खर्च जुटाउन नसकेर घरमै थलिए मृगौला पीडित,सहयोगको अपिल, सेयर गरेर सहयोग गरौ ! – Jagaran Nepal
खर्च जुटाउन नसकेर घरमै थलिए मृगौला पीडित,सहयोगको अपिल, सेयर गरेर सहयोग गरौ !
कञ्चनपुर — थाकेको ज्’यान, सु’न्निएका खुट्टा । आधा शरीर नांगै । कोठाभित्रै प्लास्टिकको कुर्सीमा बसिरहेका उनी बेला बेलामा पी’डाले चि’च्याउँछन् । लामो श्वास लिन्छन् । केहीबेरमै शान्त हुन्छन् । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपलिका–९ मटेनाका देवराम बादी १० दिनदेखि यस्तै पी’डामा छन् । मृगौला पी’डित उनी लकडाउनका कारण डायलसिस हुन नसकेर घरमै थन्किएका छन् ।
आशाले श्रीमानको उपचारका लागि वडा कार्यालयदेखि नगरपालिका र प्रशासनसमेत धाइसकेकी छिन् । तर कतैबाट पनि उनले राहत पाइनन् । उनले कम्तिमा नि:शुल्क डायलसिसको सेवासमेत पाउन सके निकै राहत हुने आशा गरेकी छिन् । ‘डायलसिस नि:शुल्क भन्छन्, तर हामीले त्यहांँ गए ठाउँ नै छैन भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘सबै ठाउँमा धाउँदाधाउँदा थाकिसक्यौं ।’कान्तिपुरबाट